Fampianarana: manahy ny hoavin-janany ireo ray aman-dreny | NewsMada
Fampianarana: manahy ny hoavin-janany ireo ray aman-dreny
Par Taratra sur 15/07/2020
Sanganehana ny ray aman-dreny manoloana ny fianaran-janany. Tsy marim-pototra tsara ny famerenana an-dakilasy ireo mpianatra, indrindra ireo kilasy tsy manala fanadinam-panjakana izay maro anisa ny ankizy amin’ireny kilasy ireny.
Hatramin’ny faran’ny volana jolay izao, tsy mbola hiverina an-dakilasy ny mpianatra noho ny hamehana ara-pahasalamana. Heverina aza ny mbola hitohizan’izany raha izao firongatry ny aretina Covid-19 eran’ny tanàna izao.
Ny ankamaroan’ny sekoly, tsy nahavita akory ny fandaharam-pianarana. Niraviravy tanana ny ankamaroan’izy ireo nanoloana ny hamehana ara-pahasalamana ka tsy nahavita nanara-maso ny mpianatra sy nizara lesona na fanazarana akory nandritra izay efa-bolana izay. Tsy misy ny fanadinana na ho an’ny telo volana faharoa na ho an’ny telo volana voalohany. Very fanahy mbola velona ny ray aman-dreny. Ny mpianatra moa, toa miandry izay higadonany fotsiny fa tsy tanana handrangotra, tsy tongotra hitsipaka.
Ny an’ny mpanala fanadinana no efa mazava ny tetiandrom-panadinana. Na izany aza, tsy ho ampy mihitsy ny fiomanana saina ho an’ireo ankizy ireo. Tapatapaka ny fianarana nandritra ny enim-bolana farany. Niaina tao anatin’ny fitaintainana sy ny rarin-tsaina ireo ankizy manoloana ny valanaretina. Misy fiantraikany amin’ny saina ny firongatry ny valanaretina, indrindra tao anatin’izao roa volana farany izao. Tsy vitsy ny niaina aretina na namoy ray aman-dreny na olona akaiky vokatr’ity areti-mandringana ity. Mampanahy ny tsy fifantohan’ny mpianatra ao anatin’izany rehetra izany raha ny hevitr’ireo ray aman-dreny. Ankoatra izany, ela loatra ny fotoana tsy nianarana ary mety ho efa very ireo kely nianarana tany aloha. Tsy kely indrindra fa anisan’ny mbola mampiady saina ihany koa ny hiatrehana indray ny fidirana ho an’ny taom-pianarana vaovao 2020-2021 izay tsy azo ihodivirana.